पोखरालाई किन पर्यटकीय राजधानी बनाउने ? – Satyapati
पोखरालाई किन पर्यटकीय राजधानी बनाउने ?
पोखरामा मात्र मनाइने सडक महोत्सव युनिक महोत्सव हो । यस महोत्सवले स्वदेशी तथा विदेशी उल्लेख्य पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गरिरहेको छ । यसलाई अझै भव्य र सभ्य बनाउने प्रदेश सरकारको चाहना छ । पोखरा आफैंमा प्रदेश सरकारको राजधानी हो । पोखरा नेपालको पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरोस् भनेर गण्डकी प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । यसका लागि हामीले प्रस्तावपत्र केन्द्रमा पठाइसकेका छौँ । पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी बनाउन हामी चाहन्छौँ ।
पोखरा बाहिरबाट हेर्दा पर्यटकीय सौन्दर्यले भरिएको मात्रै देखिन्छ । तर, त्यो मात्रै सत्य होइन । गण्डकी प्रदेश सांस्कृतिकरुपले पनि धनी छ । ७ वटै प्रदेशमध्ये ख्यातिप्राप्त कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालदेखि झलकमान गन्धर्वसम्म यही प्रदेशका गहना हुन् । भूपिदेखि जनकवि केशरी धर्मराज थापासम्मको ठाउँ हो यो । सबैभन्दा चर्चित सालैजो भाका हाम्रो प्रदेशभन्दा अन्त छैन सायद । भए पनि त्यसको उद्गमस्थल यहीँ हो । ठाडो भाका एउटै मात्र भाका हो नेपालको, जो गण्डकी प्रदेशमा मात्रै छ । झ्याउरे, घाटु, सोरठी लगायतका धेरै सांस्कृतिक संस्कारको धरोहर त्यसको मूलथलो हाम्रै गण्डकी प्रदेश हो । यो प्रदेश नेपालमा रहेका सांस्कृतिक परम्परा र संस्कारको जीवित संग्रहालय हो ।
हुँदाहुँदा अहिले गण्डकीमा किराँतीको साकेला, उँधौली–उँभौली, तामाङको सेलो, थारु नृत्य पनि देखिन थालिसकेको छन् । सबै ठाउँका मान्छेहरूको बसोबास अहिले यहीँ छ । यसले गर्दा पर्यटनको विकास गर्न एकदमै टेवा पुग्छ । यस प्रदेशलाई विश्वसामु चिनाउन पनि केहीकेही कुराको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी देखिन्छ । सातै प्रदेशको राजधानी जस्तो पोखरालाई चिनाइराख्नु पर्दैन । पोखरा आफैंमा एउटा ब्रान्ड हो । यो प्रदेशमा पाइने थकाली खाना संसारभर चर्चित छ । फैलिएको छ । यो त उदाहरणमात्रै हो । यहाँ धेरै चिज छन्, जसले प्रदेश चिनाउँछन् । यहाँबाट उद्गम भएर धेरै चिज संसारभरि परिचित भइसकेका छन् । यहाँका खाना, संस्कृति, संगीत नै अरुभन्दा फरक छन् । यी सबै कुरामा नेपालका अरु ठाउँभन्दा अगाडि नै छौँ । साहित्य, कलासंस्कृतिमा पनि कहाँ कम छ र ? खाली यसलाई समृद्धिसँग जोड्नमात्रै बाँकी छ ।
पोखरा स्ट्रिट फेस्टिभलले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउन एकदमै राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्रान्डिङ गर्न ‘इन्टरनेस्नल कार्निभल’ बनाउनेबारे सोचिरहेका छौँ । हामी त्यसै पनि अरुभन्दा अगाडि गइसकेका छौँ । हाम्रो प्रदेशको राजधानी पोखरा हो । धेरै प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ ? भन्नेबारे आजका दिनसम्म अन्यौलको स्थिति छ । त्यसैकारण आफ्नो राजधानीको विकास कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन । भाग्यको कुरा यो पनि छ कि हामीले यो प्रदेशको राजधानी पोखरा नामबिना कुनै विवाद सर्वसम्मत रुपमा तोक्यौँ । पोखरा राजधानी भइसकेपछि ‘राजधानी’ हुनकै लागि केके चाहिन्छ त पूर्वाधार ? त्यसको लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न गण्डकी प्रदेश लागि परिरहेको छ । यसलाई हामी पर्यटकीय सहरका रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ ।
पोखरा आसपासमा थुपै स्ट्यान्डर्ड किसिमका होटेल र रिसोर्ट बनाउने योजना बनाइरहेका छौँ र त्यो क्रम अगाडि बढिसकेको छ । हामीले आफ्नो प्रदेशको नाम गण्डकी भन्यौँ । यो सबै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न, सारा संस्कृतिलाई एउटै मालामा उन्न, शान्ति र स्फूर्त बनाउन हामीले प्रदेशलाई साझा नाम गण्डकी राखेका हौँ । यो हिजो ७ वटा गण्डक (नदी) मिलेर बनेको प्रदेश थियो । आज विभाजनका कारणले त्रिशूली ३ नम्बर प्रदेशमा गाभियो । बाँकी ६ वटा नदी हामीसँगै छन् । पोखरा प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुपथ्र्यौ । त्यो पनि २०२२ भित्र तयार हुन्छ । पृथ्वीराजमार्ग न्यूनतम ४ लेनको बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ । यसका लागि एडिबीले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
फास्टट्र्याक राजमार्ग पनि बनाउन सकियो भने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँदा सजिलो हुनेछ । ११ मिटरको बन्दै गरेको जुन मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दै छ । यसले प्रदेश नम्बर ३, पश्चिमको ५ र ६ सँग गण्डकी प्रदेशलाई जोड्नेछ । त्यसले पनि हाम्रो पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । गण्डकी प्रदेशले कोरलादेखि पोखरा जोड्ने सडक जोड्ने काम भइराखेको छ । त्यो काम पनि लगभग पूरा भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश समृद्धिको माला उनेर अगाडि बढ्न तयार छौँ । थुंगाहरू त बिस्तारै जोडिरहेका छौँ । चाँडै माला बन्नेछ । सडक र हवाईमार्गले हामी सम्पन्न हुनेछौं । अहिले पनि गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक पर्यटक करिब ६ लाख पर्यटक भित्रिरहेको पाएका छौँ । अहिले नेपालमा १० लाख बाह्य पर्यटक आए, त्यसको ४० प्रतिशत पोखरामा आएका छन् ।
त्यसकारण अहिले हाम्रो प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक १० लाख पर्यटक भित्र्याउँदै छ । अब हामीले ४ वर्ष्भित्रमा अर्को १० लाख भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । महत्वाकांक्षी लाग्न सक्छ । तर, हामीले विश्वास गरेका छौँ । २०२२ सम्म १० लाख पर्यटक यहाँ भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । पर्यटक भित्र्याउने कुरा हाम्रो आन्तरिक कुरासँग जोडिएको छ । त्यसैले फेवाताल, पार्क, सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरसँग मिलेर काम गर्नेछ । पोखरामा अहिले सबै प्रकारको खेल खेल्न मिल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने योजना अघि सारेका छौँ । यसका लागि केही दिनअघि मात्रै चाइनिज कम्पनीले फिल्ड भिजिट गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले त्यसमा समन्वय गर्न केन्द्रीय सरकारसँग माग गरिसकेको छ ।
पुसको अन्त्यतिर बहुउद्देश्यीय खेलमैदान गर्न चाइनासँग सहमति गर्दैछौँ । त्यसले पनि यहाँ पर्यटकको संख्या भित्र्याउने कुरामा ढुक्क छौँ । सबै कुराले सम्पन्न राजधानीमा ३६५ दिनै कन्फ्रेन्स भइरहने खालको कमसेकम एकैचोटि ३–४ हजार अटाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह बनाउन योजना बनाएका छौँ । यसका लागि लगानीकर्ता खाजिरहेका छौँ । निजी कम्पनीसँग कुरा गरिराखेका छौँ । बाह्य मुलुकको शक्ति र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चासो देखाएन भने गण्डकी प्रदेशले पोखरा महानगरसँग मिलेर आफैं बनाउँछौँ । पोखरामा एउटा राम्रो जमिन खोजिरहेका छौँ । त्यहाँ हामीले बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउने छौँ । त्यो ग्राममा नेपालमा पाइने सबै जातजातिको घर हुने छ । त्यहाँ हामीले ठूलो कल्चरल हल हुनेछ । पोखरासँग जोडिएका स्याटलाइट गाउँलाई स्मार्ट गाउँ बनाउने तर्खरमा छौँ । होमस्टे छन्, तिनीहरुलाई छानेर स्मार्ट होमस्टे बनाउन आगामी वर्ष बजेट छुट्टयाउने छौँ ।
चार वर्षभित्र ती होमस्टेबाट गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा थप विकास गर्ने छौँ । यसले यहाँको गरिबी घटाउने छ । हाम्रो देशमा उद्योग, कलकारखानाको विकास नभई सकेका कारणले करको दायरा पनि सानै छ । हामी गरिब छौँ । आम्दानीका हिसाबले कमजोर छौँ । जुन सरकारको आर्थिक आम्दानी कम हुन्छ, निश्चित रुपमा त्यो ठाउँमा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै भित्र्याउनुपर्छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारले जुन क्षेत्रमा लगानी हुने सम्भावना हुन्छ, त्यो क्षेत्र चुनेर हामीले विकास गरिरहेका छौँ । पर्यटन नै गण्डकीको आर्थिक आम्दानीको मुख्य आधार हो । हामीलाई प्रकृति र संस्कृतिले धेरै साथ दिएको छ । त्यसैले यहाँको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि होइन, उद्योग होइन, ऊर्जाको क्षेत्र होइन । पर्यटन नै हो भनेका छौँ । किनभने यसले रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
(पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको २०औं सडक महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)